जिन्दगीको यात्रासँग साक्षात्कार [कृति समीक्षा] – Chitwan Post
– अरूणबहादुर खत्री ‘नदी’
होमनाथ खनालको ‘यात्रा जिन्दगी’को नामक संस्मरण कृति २०७५ चैतमा प्रकाशित भएको हो । यस सङ्ग्रहभित्र उनीद्वारा लेखिएका लहलहैमा चोरी, भागेर ताप्लेजुङ, भिरगाउँकै भर, आमाको माया, तोप्केगोलाको रहर, सावाँको त्यो अमरमाया, मंगलीकै झझल्को, वामेको आरोपमा यातनालगायत विभिन्न शीर्षकका २७ वटा संस्मरण राखिएका छन् ।
लिम्बू, गुरूङ, मगर, शेर्पा, क्षेत्रीका संस्कृतिमा पनि अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरू देवो भव, पितृ देवो भवको सम्मान पाए लेखकले । लेखकले सम्पत्ति र नातागोताबारे मार्मिक अनुभवको प्रस्तुति बताएका छन् । आफूसँग सम्पत्ति नभएको बेला नातागोता, इष्टमित्र, छरछिमेक, बन्धुबान्धवले कतिसम्म हेलाँ गर्दारहेछन् र फेरि सम्पत्ति भएपछि कसरी नजोडिएको सम्बन्ध पनि जोडाएर रकम सापटी माग्न, छोराछोरीलाई जागिर खुवाउन, चामल र लुगा किनिदिन धेरै शीर्षकमा साइनो जोडिएका बारे यस सङ्ग्रहभित्र प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । यो विषय जोकोही नेपालीका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अल्झिने वा बल्झिने विषय हो ।
‘सम्पत्तिमा सबैको हाईहाई विपत्तिमा कोही पनि छैन दाजुभाइ’ उखानले होमनाथलाई शतप्रतिशत छोएको देखिन्छ । जातपात, धर्म र संस्कृतिलाई त्यसबेलाको समाजमा कति कठोरताका साथ लिइन्थ्यो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यस कृतिका लेखक होमनाथले कसरी समाजबाट तिरस्कृत हुनबाट आफू र परिवार संरक्षण गर्दै उदाहरणीय परिवार बनाए भन्ने पुस्तकभित्र दर्शाइएको छ ।
पुस्तकले २००५ सालदेखि २०३५ सालसम्म जन्मिएका पुस्ताको जीवन प्रतिनिधिमूलकरुपमा प्रस्तुत गरेको छ । २०३५ सालपछि जन्मिएका पुस्ताका लागि चाहिँ यो सङ्ग्रह उनीहरुका बाबाआमा कस्तो समाजमा बाँचेका रहेछन् भन्ने सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
होमनाथले आफू जन्मेको तेह्रथुमको सोल्मा गाउँलाई कसरी भुलूँ ? सधैँ डुलेर हिँड्ने चिसो बतास म कसरी बिर्सूं ? आँगनबाटै देखिने त्यो कञ्चनजङ्घा हिमालको ताजा स्मृति म कसरी मेटाऊँ ? भनेका छन् । बिहानको पढाइ सकी दिनभर जागिरका लागि दौडधूप गर्थे उनी । तर, जागिरको कहीँकतै अत्तोपत्तो हुँदैनथ्यो । जागिरका लागि आफूले भेटेजति जम्मैलाई अनुनय–विनय गर्थे तर हुन्छ, भनिदिऊँलाबाहेक अर्को जवाफ आउँदैनथ्यो । ‘जागिरकै चिन्ता’ शीर्षकको संस्मरणमा उनले यी कुरा लेखेका छन् ।
‘टिम्बर कर्पोरेसनमा प्रवेश’ शीर्षकको संस्मरणमा घरभेटीसँग लिएको सापटी तिर्ने रकम छैन । दमयन्तालाई लिएर जाने भाडा छैन । अब कसरी जुटाउने ? यही पीर छ । बेचुम् भने केही छैन । अब जे त होला । तीस रूपैयाँजति सापटी माग्नुप¥यो । अस्तिको पनि बीस बाँकी नै छ । जम्माजम्मी पचास हुने भो भनेका छन् ।
‘मनै जलाउने त्यो खबर’ शीर्षकभित्र वर्षाको बिदा हुनै लाग्दा तोप्केगोला जानुपर्छ भनेर कुरा गर्न शेर्पा दाइ आइपुग्नुभयो । मलाई गोला साह्रै मन परेको थियो, त्यसैले हुन्छ आउँछु भने । गोलामा जाँदा केही रकम पनि आउने हुँदा आफूलाई गोला जान मन लागेको हो भनिएको छ ।
‘एउटा पत्र तिमीलाई’ शीर्षकको संस्मरणमा गाउँमा धान नाच चलिरहेको थियो । म पनि अलिअलि नाचेकै छु । यहाँ पनि राति एक बजेसम्म नाचियो । सबै कुरा उमेर नै रहेछ । त्यतिखेर रातभरि बस्न पनि सकिन्थ्यो भनिएको छ ।
सस्मरणको भाषा सरल छ । सरल शब्दमा संस्मरणहरु पढ्नमा जति सजिलो हुन्छ त्यसैगरी बुझ्नसमेत कठिनाइ पर्दैन भन्ने भनाइ पाठक वर्गको देखिन आउँछ । अन्त्यमा, उनका अन्य राम्रा–राम्रा सङ्ग्रहहरु थपिँदै जाओस् भन्न चाहन्छु ।
कृतिकार : होमनाथ खनाल
संस्करण : पहिलो, विसं २०७५, चैत
मूल्य : रू. २७५।–
प्रकाशक : बिएन पुस्तक संसार प्रा.लि.